Senaatar Maarkoo Ruubiyoo Obaamaan dhimma mirga namaa Itoophiyaaf xiyyeeffannaa akka laatu gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Senaatar Maarkoo Ruubiyoo Obaamaan dhimma mirga namaa Itoophiyaaf xiyyeeffannaa akka laatu gaafate
Senaatar Maarkoo Ruubiyoo Obaamaan dhimma mirga namaa Itoophiyaaf xiyyeeffannaa akka laatu gaafate
Seenaatar Maarkoo Ruubiyoon 2016'tti perezidaantii Ameerikaa ta'uuf woldorgommii keessa jira
Senaatariin biyya Ameerikaa Markoo Ruubiyoon, miseensa Koree Senetii Hariiroo Biyya-alaa, Perezidaantiin Ameerikaa Baaraak Obaamaa yeroo daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeessan dhimma mirga namaafi wolabummaa pireesii dursa laatuu akka qabu gaafate. Kana kan gaafate, Maarkoo Ruubiyoon, xalayaa guyyaa kaleessaa Obaamaaf barreesseen.
Senatarichi kuni Ameerikaa fi Itoophiyaan dhimmoota garagaraa irratti michummaa gaarii qabaachuu isaanii tuqee, dhiittaafi sarbamiinsi mirga namaa Itoophiyaa keessatti bal’inaan raawwatu waan osoo ijaan argan bira dabramuu qabuu miti jedheera. Itti dabaluudhaanis, mootummaan Itoophiyaa daandii siyaasaa, hawaasummaafi sabahimaa lammiileen biyyattii addaaddummaa ilaachaafi imaammataa mootummaa ykn dhaaba biyyattii bulchu woliin qaban hunda cufuudhaan biyyattii gara tasgabbii dhabuutti geessa jedha Maarkoo Rubiyoon.
Maarkoo Ruubiyoon, Obaamaan yeroo biyyattii daawwatutti, dhuunafattis angawoota biyyattiitti, akkasumas ifatti hidhaa lammiilee irratti raawwatu akka balaaleffatuu gaafateera. Mottummaan Itoophiyaa mirga namaafi mirga wolgahuu lammiileef biyyattif akka kabaju Obaamaan jajjabeessuu qaba jedheera. Ameerikaan, jedha Maarko Ruubiyoon, hundi dimokraasiifi mirgaaf akka argatuuf jajjabeessuu qabdi, ummata Itoophiyaas dabalatee.
Dawwannaan Obaamaa Itoophiyatti godhu,hHanga mirga namaatiif xiyyeefannaa hinlaannetti, mootummicha mirga laammii isaa sarbu fudhatama qabeessa fakkeessuu nimala jechuun sodaa isaa ibseera.
Akka eeggamaa turetti mootummaan Itoophiyaa gara sirna dimokraasii simatutti osoo hintaane suutaan garaa abbaa irrummaattii geeddaramaa dhufeera, akka Maarkoo Ruubiyootti. Rakkoo siyaasaan wolqabatee biyyatti keessatti yeroo addaddaatti gayaa tures yaadachiisanii, filannoon bara kana geggeeffames bilisa, madaalawaafi amanamaa hinturre jechun qeeqaniiru.
kabajamuu mirga namaa
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa Yaman jiraatan ukkaamsamanii fudhatamaa jiru
Next articleBarack Obama urges Ethiopia to curb crackdowns on media, opposition